'अब सबै सरकारी संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने' - Aarthiknews
केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषदमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड नियुक्त भएको करिव ११ महिना भएको छ । उद्योगी समेत रहेकाम दुगड राज्यमन्त्री भएपछि उद्योग मन्त्रालयबाट उद्योगी व्यापारीले पाउनु पर्ने सुविधा पहिलाको भन्दा सहज रुपमा पाइरहेको उनी बताउँछन् । यो मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष उद्योगी व्यापारीसँग जोडिएको मन्त्रालय भएकाले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने थियो । सोचेको जस्तो काम हुन नसके पनि मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोगमा उद्योगको क्षेत्रमा केहि नयाँ र थप सुविधाका काम भने गरेको उनी दावी गर्छन । राज्यमन्त्री तथा उद्योग मोतिलाल दुगडसँग आर्थिकन्युज डटकमले गरेको आर्थिक बहसको सम्पादित अंशः
तपाईं मन्त्री हुनुभएको करिब ११ महिना हुन लाग्यो यो अवधिमा के के काम गर्नुभयो ?
म मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयले यसभन्दा पहिला गरिहेका कामहरू हेरे । नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि मैले धेरै काम गर्नुपर्ने देखेको छु । त्यसमध्ये धेरै कामहरू हामीले गरिरहेका छौं । मनत्रालयले अघि बढाइरहेका कामहरू रोक्ने वा पछाडि पार्ने कुनै पनि मनसाय नहुँदा नहुँदै पनि कोभिडले गर्दा केहि कामहरू रोकिएका छन् । केहि कामको प्रगति अलि ढिला भइरहेको छ ।
यी सबै व्यवस्थालाई सहज गर्न मन्त्रालयमा रहेका नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केहि परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो मन्त्रालयमा काम गर्ने तरिकामा थोरै परिवर्तन ल्याएका छौं । पहिला सबै कामहरू परम्परागत रुपमा गरिन्थ्यो । मन्त्रालयमा आएका कामहरूको जवाफ पाउन धेरै समय उद्योगीहरूले पर्खिनु पथ्र्यो । तर, अहिले त्यस्तो परम्परालाई हामीले परिवर्तन गरिसकेका छौं । मन्त्रालयमा कुनै पनि कामले आएका फाइलहरूको जवाफ तुरुन्तै गर्ने परम्परा बसालेका छौं । यसबाट उद्योग व्यवसायीहरूको मूल्यवान समयलाई बचाउन सफल भएका छौं । देशको समृद्धि र जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिनलाई वाधा गर्ने ऐन कानुनहरू परिवर्तन हुन्छन् ।
मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीले तपाईहरूको कामलाई कतिको सहयोग गरिरहेको पाउनु भएको छ ?
परम्परावादी काम गर्ने शैलीलाई हामीले परिवर्तन गरेपछि सबै कर्मचारीहरू खुसी हुनुहुन्छ । सबै कर्मचारीहरू विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा अहोरारात्र खटेर सफल बनाउनु भएको छ । सचिवज्यू तथा अन्य कर्मचारीहरूको सहयोगले नै हामीले उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासोलाई कम गर्न सफल भएका छौं । विश्वभरी फैलिएको महामारीका बेलामा पनि देशमा कुनै पनि वस्तुको अभाव हुन हामीले दिएनौं । यो सबै कर्मचारीहरूले गरेको व्यवस्थापनको परिणाम नै हो । यो महामारीका बेलामा हामीले जनताका घरघरमा अत्यावश्यक वस्तु पुर्याएका छौं । यसबाट हामीलाई आत्मसन्तुष्टी मिलेको छ ।
मन्त्रालयमा यति अवधि काम गरिसकेपछि नेपाललाई औद्योगिक मुलुकका रुपमा विकास गर्न के के गर्नुपर्ने देख्नु भयो ?
मन्त्रालयले लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि बनाएको धेरै नीति तथा कार्यक्रम नै देशलाई औद्योगिककरणका लागि बाटो खुला गर्ने खालका छन् । तर, मन्त्रालयमा यसभन्दा पहिला काम गर्ने शैलीका कारण हुने काम पनि नहुने गरेको थियो । औद्योगीकरण भनेको उद्योगीले खोल्न लागेको उद्योगको काम फटाफट भयो र उसले बनाएको योजना अनुसार काम गर्न पयो भने यसैबाट औद्योगीकरणको शुरुवात हुने हो ।
औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माणले पनि गति पाउन नसकेको, कतिपय ठाउँमा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको अवस्था छ । उता विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अझै पनि उद्योगको दर्ता उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेका छैैनन । यसमा के कारण होला ?
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेका छौं । औद्योगिक ग्राम प्रत्येक स्थानीय तहमा गर्ने तयारी भइहेको छ । सेज र औद्योगिक ग्रामहरूमा कर्मचारीको अभावमा जुन रुपमा सञ्चालनले तिव्रता लिनुपर्ने थियो त्यहि रुपमा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले हामीले केहि ऐन र नियमावलीहरूमा परिवर्तन गरेर अलि बढी सुविधा दिएर सेजमा उद्योगीको आकर्षण बढाउन लागिरहेका छौं । यो महामारीमा पनि हामीले सबै क्षेत्रका उद्योगहरू सञ्चालनमा कुनै पनि बाधा अड्चन नओस भनेर काम गरिरहेका छौं । उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरूको अभाव हुन नदिनका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सबै उपयाहरू अपनाएका छौं ।
नेपाल ट्रेडिङमा आधारित अर्थतन्त्रमा टिकिरहेका छ । हामीले आन्तरिक औद्योगीकरण नहुँदासम्मलाई ट्रेडिङलाई पनि सहजीकरण गर्नै पर्छ मन्त्रालयले यो क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सहजीकरण गर्न के के काम गर्दैछ ?
नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले ट्रेडिङ व्यापारमा धेरै कठिनाइहरू छन् । यसमा मुख्य समस्या भनेको लजिष्टिकमा हो । हामीले भारतको कलकत्ता बन्दरगाह भनौं वा अन्य बन्दरगाहबाट सामान लिएर नेपाल आउँदासम्म उक्त सामानको मूल्य धेरै पर्ने गरेको छ । अब एयर कार्गोबाट ल्याउने हो भने अझ महँगो पर्न जान्छ ।
सरकारी संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा केहि नयाँ योजना सरकारले ल्याउदै छ ?
सरकारले यस वर्षदेखि नयाँ अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब सबै सरकारी संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने । सरकारले चलाएका संस्थानहरू नै घाटामा चले भने सरकारको साख गिर्ने भएकाले अब सबै संस्थानहरूलाई जसरी भएपनि नाफामा लैजाने योजना ल्याइएको हो ।
प्रत्यक्ष बिक्रि प्रणाली नेटवर्किङ व्यवसाय आफैमा विवादित बनिरहेको छ । अहिले फेरि सरकारले यसलाई कानुनी मान्यता दिने भनेर बाहिर आइरहेको छ । अब नेटवर्किङ व्यवसायले कानुनी मान्यता पाउने भएको हो ?
अहिले ने प्रत्यक्ष बिक्रि प्रणालीले गर्दा नै धेरैले अनलाइन मार्फत सेवा पाइरहेका छन् । यसमा अनलाइन भनौं वा नेटवर्किङ भनौं यसमा खराब काम गर्ने पनि छन् । जे सुकैको नाममा काम गर्ने भएपनि गलत काम गर्नेहरूको कम्पनी नै खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रियामा मन्त्रालय अघि बढेको छ ।
चाडपर्वका बेलामा बजारमा अनैनिक क्रियाकलापहरू बढिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण वा अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच समन्वय नहुँदा गलत कार्य गर्नेहरूले छुटपाइरहेका छन् यस विषयमा मन्त्रालयले के गर्दै छ ? \_
स्थानीय तह र सरकारबीचमा केहि दुविधाहरू पनि छन् । केहि कानुन बन्न बाँकी भएका कारणले कुन क्षेत्रमा कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या आइरहेका छन् । तर, पहिलो कुरा भनेको जनताले सर्वसुलभमा सामान र वस्तु पाउने व्यवस्था गर्ने हो । सरकारले चाडपर्वका बेलामा कालोबजारी नहोस् भनेर अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ भने सरकारले आफै विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेर जनतालाई सेवा दिइरहेको छ । त्यसका साथै मन्त्रालयले यो महामारीका बेलामा पनि नेपाली जनता एक दिन पनि भोको वस्नु नपरोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइलाई सार्थक बनाउन राहत वितरणमा पनि अहोरात्र लागि रहेको छ ।
तपाईं त एक उद्योगी पनि अहिले यो महामारीमा उद्योगी व्यापारीहरूले पाउने भनेको राहत पाउने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
यस्तो कठिन घडीको बेलामा हामी सबै मिलेर समस्याको सामाना गर्ने नै हो । यहा सरकारी ढुकुटीमा अथवा पैसा भएर सबैलाई नबाँडेको पक्कै होइन । यो सबैलाई थाहा नै छ । अब व्यापारीलाई पनि राहत चाहिएको छ । जनतालाई पनि राहत चाहिएको छ । यो बेलामा मन्त्रालयमा धेरै गुनासोहरू उद्योगीहरूको आइरहेको छ ।
सबैलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा चाडो चाहियो, बिजुलीको बिलमा छुट, बैंकको ब्याजमा छुट यस्तो गुनासो मन्त्रालयमा दैनिक जसो आइ नै रहेका छन् । समस्या सबैलाई परेको छ । सबैजना मिलेर यो समस्यालाई पार नलाग्ने तर्फ लाग्न पर्छ । सरकार पनि समस्यामा छ । यो पनि सबैले बुझ्न पर्यो ।
कति दिन टिक्ला यो 'पोटेम्किन' अर्थतन्त्र ?
यातायात क्षेत्रको उद्धार गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण चाहिन्छ
सार्वजनिक नीति र व्यवसाय स्थानान्तरणको संवेदनशीलता